विचार/दृष्टिकोण Archives - Medianp
मिडिया एनपी २प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ ३१, २०७४०९:५४0
सुदीप विमली/टिप्पणी काठमाडौं, ३१ भदौ । अहिले सामान्य मानिसले निवार्चन लड्न सक्दैन । यो सत्य कुरा हो । २०६४ यताका निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने यो कुराको पुष्टि हुन्छ । चुनाव महंगो बन्दै गइरहेको छ । राजनीतिमा
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ १०, २०७४०९:३३0
सुदीप विमली/टिप्पणी संविधान जारी हुनु अघि देखि नै देशमा एक किसिमको असन्तुष्टि थियो । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि त्यो असन्तुष्टीले उग्ररुप लियो । संविधानसँग असन्तुष्टि राख्दै तराई–मधेस केन्द्रीत दलहरुले लामो संघर्ष गरे ।
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन १४, २०७४१३:३१0
कमल थापा । राप्रपालाई नियतिले फेरि एक मौका दिएको छ, सत्ताकेन्द्रित र सत्तामुखि राजनीतिबाट अलग भै सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति गर्ने तथा संगठन निर्माण र सुदृढिकरणमा केन्द्रित रहने । हाम्रो छनौट भन्दा पनि यो अवसर
मिडिया एनपी २प्रकाशित मिति: मङ्गलबार, असार १३, २०७४१३:१५0
बसन्तप्रकाश उपाध्याय एक ‘गाछी–छाप’ पार्टीका शुभचिन्तक भेटिए । उनले भने – ‘असार १४ गते त ठूलो पानी पर्छ भन्ने सुनेको छु । ठूलो पानी परेपछि सौखिन–नेता एवं कार्यकर्ताहरु भोट हाल्न नजालान् नि फेरि ।’ मन पोलेर हृदयदेखि
पतनको बाटोमा राजपा ! सकिने बाटोमा हिड्ने की जनताको मत लिने ?
Media NPप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, जेठ ३०, २०७४०८:२५0
टिप्पणी/सुदीप विमली काठमाडौं, ३० जेठ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग नलिने र निर्वाचन भाँड्न आन्दोनका गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार राजपाले लिएको आन्दोलनको निर्णय उसकै लागि घातक हुने देखिन्छ
संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी किन बाधक ?
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २४, २०७४१५:४६0
समाचार टिप्पणी÷तीर्थराज बस्नेत राजनीतिक प्रणाली नै परिवर्तन भएर आएको संघीयता कार्यान्वयनको ‘पिक आवर’मा आएर कर्मचारीले असहयोग गर्दै आएका छन् । राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन हुँदा समेत करिब ८० हजारको संख्यामा रहेका निजामति कर्मचारीले भने पौने तीन करोड
मैले तक्मा किन पाउने हजुर ?
Media NPप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, जेठ १६, २०७४०९:२०0
हो हजुर ! मैले तक्मा पाउनुपर्ने कुनै कारण देखिनँ । गणतन्त्र नामधारी यो तक्मा पाउन त गणतन्त्रको लागि केही योगदान त गर्नुप¥यो नि होइन र हजुर ! मैले तक्मा पाउनुपर्ने त्यस्तो के नै पो गरेको
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ ११, २०७४०९:४०0
वसन्तप्रकाश उपाध्याय मुलुकको चालीसौं र व्यक्तिगत तवरमा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका बारेमा चर्काचर्का टिप्पणी र अनेकन् खालका विचार उठान भएका छन् यतिखेर । स्वभावतः सत्ता परिवर्तन सन्निकट परिवेशमा यस्ता कुराहरु
यस कारण कांग्रेससँग मतदाता टाढिए
Media NPप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, जेठ ०९, २०७४०४:४०0
काठमाडौं, ९ जेठ । एक साताअघि सम्पन्न तीनवटा प्रदेशमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणामअनुसार संसद्को पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा देखिएको छ । संसद्मा दोस्रो स्थानमा रहेको एमाले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामअनुसार पहिलो
त्यसबेला बेलाको काँग्रेस नभएको भए अदालतलाई एमालेले उहिल्यै कोठीमा पुर्‍याइसक्थ्यो
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख २०, २०७४०८:४४0
जेपी गुप्ता २०५१ को संसदीय मध्यावधि निर्वाचन भै संसद गठन भइसकेको थियो । म पनि २०५ सांसद मध्ये एक थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद बिघटनका लागि गर्नुभएको सिफारिशलाई सर्वोच्च अदालतले अस्विकार गरेकाले संसदले